Ngenisa ngePubPub- AfricArXiv
Ukuba usebenze, usebenza ngoku, okanye unomdla wokusebenza kuphando olunxulumene nesifo se-coronavirus kwaye ungathanda ukungenisa, nceda ulandele le miyalelo ingezantsi.
1. Ukurekhoda ividiyo yakho
Nceda uqwalasele ukufunyanwa okuthile okanye inqaku lophando.
Chaza igama lakho, umdibaniso, uqeqesho kunye nelizwe.
Xoxa ngolwazi olufanelekileyo osifumeneyo okanye onethemba lokulufumana ngomsebenzi wakho, kubandakanya neendlela zendlela kunye neendlela zesayensi.
Yenza iingcebiso ezivela kwisigqibo sakho okanye into oyibonileyo. Ukuba kunokwenzeka, nceda ubandakanye ukuba ngubani oza kufumana lo msebenzi ubaluleke kakhulu (ezinye iindawo zophando okanye umsebenzi oqhubekayo, ukusebenzisana okukhoyo).
Chaza izikhombisi ezi-3 ukuya kwezi-5, kubandakanya ezakho. Nceda unikezele ngolwazi olwaneleyo (amagama ababhali, unyaka wokupapasha, isihloko senqaku, isihloko senqaku) ukuze irekhodi ifumaneke kwiqela lethu. Ukuba kunokwenzeka yongeza i-doi efanelekileyo kwifom yokungenisa.
Chaza ukuba uyavuma ukwabelana ngokurekhodwa phantsi kwe Ilayisensi ye-CC-BY.
2. Ngenisa ukurekhoda kwakho
Nceda usebenzise le fomu. Qiniseka ukuba ugcwalisa zonke iinkalo ezifunekayo kwaye ulayishe ukurekhoda kwakho. Ukuba unemibuzo okanye ingxaki, nceda uthumele i-imeyile: info@africarxiv.org
Nceda ufunde izikhokelo zethu ngaphambi kokuba ungenise, qinisekisa ukuba uhambelana noluhlu lokutshekisha kwaye unikezela lonke ulwazi olufanelekileyo kwimibhalo ebhaliweyo.
3. Yintoni onokuyilindela
Emva kokungenisa ngempumelelo ukurekhoda kwakho, ungalindela ukuva kwakhona kuthi ngaphakathi kweentsuku ezi-5 zomsebenzi.
Ukuba kwamkelwe, ungenelelo lwakho luya kubhalwa kwaye kuya kuthunyelwa kwizalathiso ezifanelekileyo. Ifayile yeaudiyo / ebonakalayo iya kuthunyelwa kwi-Intanethi kwi I-AfricArXiv PubPub ingqokelela nge-Crossref DOI kunye CC BY 4.0 Iphepha-mvume lokunikezela .. Ifayile yokubhaliweyo iya kulayishwa kwelinye lamaqonga amaqabane e-AfricArXiv (i-OSF, iSayensiOpen, okanye iZenodo).
Siza kongeza i-AI / umatshini wokuguqula isicatshulwa kwezinye iilwimi ezi-2 ukuya kwezi-3 ukuba ubonakalisa nayiphi na into oyifakileyo kwaye ngakumbi ukuba iilwimi ezithile zibalulekile ngenxa yemeko yommandla.
Kwimeko yazo naziphi na iingxaki, imibuzo okanye iinkxalabo, imeyile: info@africarxiv.org
IQela loLwazi lweKamva kunye neAfrikaArXiv	 23I Epreli 2020	 akukho Izimvo
I-PubPub, iqonga lokusebenzisana elinomthombo ovulekileyo elakhiwe liQela loLwazi lwexesha elizayo, libambisene neAfricArXiv, indawo yokugcina izinto zangaphambili zaseAfrika, ukusingathwa kwendlela yokurekhoda / yokubonwayo. Olu bambiswano…